Football Khabar » इस्पान्योल भर्सेस बार्सिलोना : पहिलो हाफमा बार्सिलोना १–० ले पछि !
इस्पान्योल भर्सेस बार्सिलोना : पहिलो हाफमा बार्सिलोना १–० ले पछि !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा अहिले क्याटलान डर्बी भिडन्त जारी छ । नयाँ वर्ष २०२० को पहिलो तथा लिगको १९औं खेलमा २०औं स्थानको इस्पान्योल र दोस्रो स्थानको बार्सिलोना भिडिरहेका छन् । इस्पान्योलको घरेलु मैदानमा जारी खेलेको पहिलो हाफमा घरेलु टोलीले १–० को अग्रता लिएको छ ।
आफ्ना घरेलु दर्शकमाझ खेलिरहेको इस्पान्योलले खेलको २३औं मिनेटमा पाहुना टोली बार्सिलोनाविरुद्ध गोल गरेको थियो । मार्क रोकाले फ्रि किकमा हानेको बलमा डेभिड लोपेजले हेडिङमार्फत् सुन्दर गोल गरेका थिए । लोपेजेको फ्रि हेडरमा बार्सिलोनाका डिफेन्डर र गोलकिपरले बल रोक्न प्रयाससमेत गर्न भ्याएनन् ।
प्रकाशित मिति २० पुष २०७६, आईतवार ०२:२७